Botswana's President Mokgweetsi Eric Keabatswe Masisi tales part in a panel discussion at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Tuesday, Jan. 21, 2020. The 50th annual meeting of the forum will take place in Davos from Jan. 21 until Jan…
Mutungamiri weBotswana, VaMokgweetsi Masisi, avo vari kutarisirwa kutora mwedzi uno husachigaro hwebazi reSADC Troika rinoona nezvekudzivirirwa nekugadzikana kwedunhu, vanoti nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe yakora muto naizvizvo inoda kuti iturirwe kuna sachigaro weSADC mutsva, kwete we Troika.
Vachitaura nevatori venhau mushure mekunge vapinda musangano weSADC Organ Troika of Politics, Defense and Security, uyo vakaitirwa padandemutande (virtual meeting) neChitatu manheru, VaMasisi vati Zimbabwe yafanira kutora nzira yakatorwa neLesotho makore mashanu apfuura.
Makore mashanu apfuura, Lesotho yakaturira SADC nyaya yekusamira zvakanaka kwezvematongerwo nyika munyika iyi mushure mekuuraiwa kwevaimbove mukuru wemauto enyika iyi, VaMaaparankoe Mohao, muna 2015.
VaMasisi vati vakatarisira kuti Botswana ichashanda nesimba kuti kuve nerunyararo uye remekedzo yekodzero dzevanhu munyika dziri muSADC panguva iyo vari panyanga sezvo nyika yavo ichizivikanwa nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Masangano akawanda kusanganisira reSouthern Africa Trade Unions Coordination Council kana kuti SATUCC, iro rine nhengo munyika gumi neina munyika gumi nenhanhatu dzinoumba sangano reSADC kusanganisira sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, ari kushora kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe.
Munyori mukuru wesangano iri, Muzvare Mavis Koogotsitse, vaudza Studio7 parunhare kuti sangano ravo richabatsirana nemasangano anorwira kodzero dzevashandi munyika mukumang’arira Zimbabwe kusangano revashandi pasi rose reInternational Labor Organization kana kuti ILO.
Asi vanoona nezvekurongwa kwemabasa mubato rinopikisa reMDC Alliance mudunhu reBotswana iro riri pasi peSouth Africa Province, VaTaurai Mavhoko, vanoti vatungamiri venyika dzemuSADC vanodya mundiro imwe chete, ndosaka vasiri kuda kuomesera mumwe wavo wemuZimbabwe, VaEmmerson Mnangagwa.
Nyanzwi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi wemitemo paGaborone University College of Law and Professional Studies, VaCharles Kungwengwe, vaudza Studio7 kuti kuisa nyaya yeZimbabwe kuti izeyiwe pamisangano yeSADC kungabatsira zvikuru.
Chizvarwa cheZimbabwen chinorarama nechamuka inyama mudhorobha reGaborone, VaPedzisai Mombeshora, vati yambiro yaVaMasisi ndiyo chete ingapedza mhirizhonga munyika nokuti kupedza nyota kuenda padziva.
Sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica raburitsa gwaro richikurudzira SADC neAfrican Union kuti masangano ayo apindire munyaya yekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nehurumende yaVaEmmerson Mnangagwa.
Human Rights Watch yati pane vanhu vanodarika makumi matanhatu vakasungirwa kuratidzira kwanga kwakarongwa nesangano re July 31st Movement.
Vanhu ava vanosanganisira munyori ane mukurumbira, uyo akadomwa kukwikwidza mubairo weBooker Prize, Tsitsi Dangarembgwa; mutori wenhau, Hopewell Chin’ono, mutauriri weMDC Alliance, Muzvare Fadzai Mahere; murongi we July 31st Movement, VaJacob Ngarivhume, nevamwe vakawanda.
Mudzidzi wezvekutorwa kwenhau, Tawanda Muchehiwa, akapambwa akarohwa kusvika itsvo dzake dzakuvara zvokuti achiri muchipatara achirapwa.
Human Rights Watch inoti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu inofanirwa kuferefetwa, uye kusunga vanhu vacho vari kutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaNick Mangwana, vaudza vatori venhau kuti hurumende yeZimbabwe haisi kutyora kodzero uye kupamba vanhu.
VaMangwana vati aya mashoko ari kufambiswa nevanopikisa, avo vakanzi naVaMnangagwa nemusi weChipiri, vanhu vari kushanda sematororo muZimbabwe.
Musangano weSADC wepagore uri kutanga musi wa 10 kusvika 17 Nyamavhuvhu uchiitirwa padandemutande apo pari kutarisirwa kuti mutungamiri weMozambique, VaFilipe Nyusi, vatore husachigaro hweSADC, ukuwo VaMasisi vatore husachigaro hweSADC Troika.